Waa Kuma Gudoomiyaha Cusub Ee Ololaha Doorashada Ee Xisbiga UCID?Wax Ka Ogow Sooyaalka Eng.Axmed Xirsi Ducaale | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waa Kuma Gudoomiyaha Cusub Ee Ololaha Doorashada Ee Xisbiga UCID?Wax Ka Ogow Sooyaalka Eng.Axmed Xirsi Ducaale
May 19, 2017 | Published by: own
Waxay ahayd dhawaan markii gudoomiyaha Xisbiga UCID ahna musharaxa madaxweyne ee xisbaasi uu magacaabay xil in badan la sugayey.
Gudoomiyuhu isagoo ka duulaya dar-dar gelinta hawlaha xisbiga gaar ahaan ololaha doorashooyinka ee sanadkan dabayaaqadiisa la filayo waxa uu magacaabay gudoomiyihii ololaha doorashada ama Election Campaign Manager.
Xilkan ayeynu odhan karnaa waa xilka ugu muhiimsan ee xisbi yeesho marka lagu jiro arimaha doorashada,iyadoo dad badan oo ku xeel dheer arimaha siyaasadu ay aamin-san yihiin in jagadani tahay mishiinka guusha ee xisbi waliba ku shaqeynayo.
Hadaba si aynu u ogaano xubinta xilkaa culus loo magacaabay waxaanu halkan idiinku soo bandhigayna qofka uu yahay gudoomiye Eng.Axmed Xirsi Ducaale.
Eng. Axmed xirsi ducaale Waxa uu ku dhashay meel u dhow amma agagaarka degmada Gar’adag ee gobolka sanaag taariikhdu markay ahayd 1968,isaga oo halkaasi ku barbaaray balse waxa uu malcaamadii , dugsiga hoose iyo dugsigiisii dhexeba
waxa uu ka dhigtay magalada Xamar .
Axmed xirsi ducaale waxa uu dugsigiisa sarre ee farsamada gacanta ka galay magaalada Hargeisa sannadkii 1986 -87.
Markii uu dhameeyay waxbarashada waxa uu noqday baayac mushtar isla magaalada Hargeisa, iyadoo la odhan karo wuxuu ahaa ganacsade da’diisa iyo ganacsigiisu ay kala weyn yihiin,waxaanu dagaalkii1988 uu ugu dhacay isaga oo ah nin baayac mushtar ah oo dukaano ganacsi ku leh magalada Hargaisa .
Axmed xirsi ducaale qaxii iyo burburkii dalka ka dib waxa uu u baxay qurbaha sannadku markuu ahaa 1989, isaga oo ka bilaabay Wadanka isu taga imaaraadka UAE nolol cusub iyo jawi cusub, waxaanu shaqo ka bilaabay magalada Abu DUBIA .
Axmed Xirsi Ducaale halgankii dibu xoreynta Somaliland waxa uu ku lahaa kaalin aan la ilaabi karin,isagoo hantidii iyo juhdigii ugu badnaa ku bixiyey sidii dalka mar uun looga xoreyn lahaa cadowgii ma naxaanka ahaa ee taliskii Siyaad Barre.
Isla Xilliyadaa Eng.Axmed Xirsi Ducaale waxa uu magaalada Abu Dhabi ka furtay xafiis u adeega diyaaradaha gaar ahaan tigidhada diyaaradaha (travel agency) wuxuuna wakiil u ahaa shirkadihii dibu dhiska dalka Somaliland sida weyn uga qayb qaatay ee Star Airlines iyo Daallo Airlines iyo qaar kale oo badan, isaga oo ahaa wakiilkii ugu waynaa ee u fadhiyay Diyaaraha Somaliland magaalada Abu dhabi.
Axmed Xirsi Ducaale waxa uu u boqoolay amma u digo rogtay wadanka Canada sannadku markuu ahaa 2004, halkaasi oo uu ilaa hadda uu ku nool yahay .
Eng.Axmed halkaa kagama hadhin taageerada dalkiisa iyo dadkiisa,balse waxa uu noqday xubnihii ugu firfircoonaa ee jaaliyada Somaliland ee dalka Canada,waxaana loo qiray inuu ka mid ahaa halgamaashii hantidooda u huray in qaranka Somaliland meel sare gaadho.
Tusaale waxaynu u soo qaadan karnaa inuu muddo dheer ahaa gudoomiyihii dhalinta taakulaynta iskuulka degmada Gar’adag.
Sidoo kale Eng.Axmed Xirsi wuxuu ka mid ahaa gudidii diiwaan gelinta Gobolka Sanaag sanadkii 2016.
Sidoo kale Eng.Axmed waxa uu siminaaro iyo tababar joogta ah siinayey ciidanka Dab-Demiska Somaliland tan iyo intii la abuuray ciidankaasi,isagoo aqoonta gaarka ah ee uu leeyahay uga faa’iideeya.
Wadanka Canada markii uu yimid waxa uu bilaabay college la yidhaahdo Keyano College, isaga oo ka qaatay shahaado isla markaana ku takhasusay sidda loogu shaqeeyo agabka amma alaabta culus (Heavy equipment operator certificate), kadib waxa uu galay jaamacad kutaala magaaladan Edmonton, AB waxa uu ka qaatay derejeda injineerka dhinaca amaanka (Safety engineering) .
Waxaanu Eng.Axmed ka shaqaynaayey in muddo ah goobaha laga soo saaro baatroolka (petrol ) ee loo yaqaan (oil sands) amma petrol ka laga tuujiyo ciida.
Sidoo kale Eng.Axmed wuxuu dalkii Somaliland gaar ahaan Caasimada Hargeysa ku leeyahay ganacsi balaadhan oo ay ka mid tahay sharkadiisa Bedbaado Company.
Axmed waxa uu muddo dheer ahaa qof umadda Somaliland mahadiso meel kastoo uu joogo.
Xisbiga Ucid uu muddo ka mid ahaa saraakiishiisa qaarada North America waxa la odhan karaa wuxuu ahaa xubnaha ugu saameynta badan haday tahay abaabulka iyo haday tahay dejinta qorshayaasha siyaasadeedba.
Dadka aqoonta gaarka ah u leh Eng.Axmed waxay ka markhaati kacayaan inuu yahay shakhsi ku sifoobay karti,aqoon,akhlaaq wacan iyo kalsooni badan uu naftiisa ku qabo.
Axmed Xirsi Ducaale waxa uu guursadey laba xaas, ubad ahaana waxa uu dhallay
caruur gaadhaysa afar waxayna kala joogaan Hargaisa , Somaliland iyo Edmonton, dalka Canada.
Guntii iyo gabo-gabadii waxaynu odhan karnaa Eng.Axmed Xirsi Ducaale waa shakhsigii ku haboonaa xilka loo magacaabay marka dhan walba laga eego.
Gudoomiyaha Ololaha Ee Xisbiga Ucid Eng.Axmed Xirsi Ducaale ayaa la filayaa inuu cudud iyo codba ku soo kordhin doono xisbiga Cadaalada iyo Daryeelka UCID..